गारमेन्ट, कुनै पनि बुनेको कपडा, बुनेको कपडा - एन्ब्जेen
बारेमा हामीलाई ANBZENG
SHIJIAZHUANG ANBZENG आयात र निर्यात व्यापार कं, लि। कपडा र कपडा निर्यात उद्यम उत्पादन र व्यापारसँग मिल्दोजुल्दो छ, मुख्यतया अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा निर्भर।
हाम्रो कम्पनीको दुई विभाग छन्, एउटा कपडा विभाग हो, अर्को कपडा विभाग हो।
- एपेरेल उत्पादनहरू: कपडा, ज्याकेट, जीन्स, शर्ट, टी-शर्ट, स्कर्ट, प्यान्ट, छोटो प्यान्ट, आउटडोर कपडा, बनियान र यस्तै।
- कपडा उत्पादनहरू: कपास, T / C, CVC, रyed्गीन, डेनिम।
Jacquard Corduroy ग्रिड Fabr ...
२ Wa वेल्स कर्डुरॉय कपडा TH ...
२१ वेल्स ज्याक्वार्ड कपड़ा TH ...
२१ वेल्स अनुकरण स्लब जैक ...
२१ वेल्स कर्डुरॉय कपडा TH ...
कपडा पुनर्निर्माण पनि कपडा कपडा को माध्यमिक डिजाइन भन्न सकिन्छ। यो डिजाइन को लागी समाप्त कपडा को माध्यमिक प्रसंस्करण को संदर्भ गर्छ नयाँ कलात्मक प्रभाव उत्पादन गर्न को आवश्यकता छ। यो डिजाइनरको विचारको विस्तार हो र यसमा अतुलनीय नवीनता छ। यसले बनाउँछ ...
१. शिफन कृत्रिम हिम गर्मीको कपडा कपडामा उपलब्ध हुँदैन, रासायनिक फाइबर सामग्रीले बनेको हुन्छ, कच्चा मालको पहिया हो। शिफन कपडा झिम्का-प्रतिरोधी उत्तम, र माथिको शरीरमा रमणीय, प्राकृतिक लटकन, शान्त र स्फूर्तिदायी भावना छ, कसरी राम्रो लगाउने भनेर लगाउने। तर शिफ ...
१. लिनिन फेब्रिक लिनन्स, भन्न अनावश्यक, ग्रीष्म clothesतुका कपडाहरूमा रन-अप छन्। यसले छालालाई सास फेर्न अनुमति दिन्छ, तर धेरै सास फेर्न पनि तपाईलाई भरपर्दो पसीना दिदैन, कुनै विघुतीय समस्या छैन, स्पर्शमा नरम पनि हुन्छ, एलर्जीजन व्यक्ति विशेष मैत्री हुन्छन्। यसबाहेक, कपडा आफै नै धेरै पूर्व हो ...